Umgaqo we-welding we-ultrasonic, i-US welding theory, umgaqo we-sonic welding
Umgaqo we-Ultrasonic Welding / Theory
Ultrasonic welding, ekwabizwa ngokuba yi-ultrasonic bonding, yinkqubo apho isantya esiphakamileyo (i-ultrasonic) amaza esandi asetyenziswa kwimisebenzi emibini okanye nangaphezulu ebanjwayo kunye phantsi koxinzelelo lokuyifaka kwisiqwenga esinye. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ukudibanisa iinxalenye zeplastiki-ngakumbi ezo zenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zeplastiki-i-welding ye-ultrasonic ibopha ngokusisigxina imisebenzi eyenziwayo ngaphandle kwemfuneko yokuncamathelisa okanye izinto zokubopha.
I-welding ye-Ultrasonic yinkqubo yezamashishini apho i-high-frequency ultrasonic i-acoustic vibrations isetyenziswe ekuhlaleni kwindawo yokusebenza egcinwe kunye phantsi koxinzelelo lokwenza i-solid-state weld. Ihlala isetyenziselwa iiplastiki kunye nesinyithi, ngakumbi ukujoyina izinto ezingafaniyo. Kwi-welding ye-ultrasonic, akukho ziibholiti ezixhamlayo, izipikili, izinto ze-soldering, okanye i-adhesives eziyimfuneko ukubopha izinto kunye. Xa usetyenziswa kwisinyithi, into ephawuleka ngale ndlela kukuba iqondo lobushushu lihlala lingaphantsi komgangatho wokunyibilika kwezixhobo ezichaphazelekayo ukuthintela naziphi na iipropathi ezingafunekiyo ezinokuvela kubushushu obuphezulu bezinto.
Isebenza njani i-welding ye-ultrasonic?
Yonke into eyenziwayo ye-welding ye-ultrasonic iya kwahluka ngokusekwe kwinto yeplastikhi edityanisiweyo, imilo yezinto zokusebenza, kunye nezinye izinto. Nangona kunjalo, inkqubo iyonke iyafana. Amacandelo adityaniswa ngonyana afakwa ngokudibeneyo kwaye abekwe phakathi "kwendlwane" yesinyithi, ewagcina endaweni, kunye ne-sonotrode yentsimbi, okanye uphondo.
Uphondo luqhagamshelwe kwitransducer, eyenza ukungcangcazela okukhulu kakhulu; Uphondo lutshintshela esi sandi sokungcangcazelisa kwimisebenzi ecinezelweyo kuyo. Ukungcangcazela kubangela ukuba iplastikhi inyibilike kancinci, kwaye uxinzelelo olusetyenziswe yindlwane luzihlanganisa kunye, lwenze ukudibana. Ngokwesiqhelo, indawo yomdibaniso apho la macandelo mabini ahlanganisene khona ngokukodwa yenzelwe ukuququzelela ukunyibilika kunye nokudityaniswa kweenkqubo. Emva kokuba iinxalenye zidityaniswe ngokufanelekileyo, ukungcangcazela kuyayeka kwaye iiplastikhi zipholile ngokukhawuleza okukhulu, zenze iqhina elomeleleyo ngokumangalisayo.
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/08/ultrasonic-welding-principle-and-process.pdf" title = "Umgaqo-nkqubo we-welding ye-ultrasonic kunye nenkqubo"]
iindidi Teknoloji tags isebenza njani i-ultrasonic welding, Umgaqo wokudibanisa i-ultrasonic, ithiyori ye-ultrasonic bonding, Umgaqo we-ultrasonic welder, Ingcamango ye-ultrasonic welder, isiseko se-ultrasonic welding, Umgaqo we-welding ultrasonic, ithiyori ye-welding ye-ultrasonic, I-Weld yase-US, Umgaqo we-welding wase-US, Ithiyori yeWelding yaseMelika, USW, Umgaqo we-USW Post yokukhangela